‘Hosha yaratidza kukosha kweICT’ | Kwayedza
‘Hosha yaratidza kukosha kweICT’
28 Aug, 2020 - 00:08	 2020-08-27T12:22:33+00:00 2020-08-28T00:11:17+00:00 0 Views
KUUYA kwechirwere cheCovid-19 kwaburitsa pachena kukosha kwenyaya dzekushandisa makombiyuta nedandemutande (Information Communication Technology) mukusimudzira upfumi hwenyika uye Hurumende iri kutora matanho akasimba ekuti chikamu ichi chivandudzwe.
Matanho ari kutorwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi aona vashandi vakawanda vemuHurumende, vemumakambani nemapoka akasiyana vachinzi vashande vari kudzimba kuburikidza nekusevenzesa makombiyuta nedandemutande.
Mashoko aya akataurwa negurukota rekuvandudzwa kwemichina yekufambisa mashoko, posvo nedzinhare, Dr Jenfan Muswere svondo rapera pavaiparura chirongwa cheCommunity Information Centre (CIC) kuMashava.
Hurumende yakatotora matanho ekuti pave negwaro reNational ICT Policy izvo zvakaita kuti huwandu hwevanhu vanoshandisa dandemutande hukwire kusvika pa8 miriyoni pakupera kwa2019.
“SeHurumende, tinoramba takazvipira muchirongwa chekuti pashandiswe dandemutande munyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika uye kuti vanhu vave neruzivo rwakadzama,” vanodaro Dr Muswere.
Vanoti Hurumende inotsigira zvikuru chirongwa chekuvhara mikana panyaya dzekuwaniswa ruzivo nechinangwa chekuti vagari vekumaruwa vakwanisewo kushandisa ICT sezvinongoitwa mumaguta nemadhorobha.
Dr Gift Machengete, avo vanove director general wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ), vanotsinhira vachiti pasi rose, nyaya dzekushandiswa kwedandemutande pakuita mabhizimisi nezvimwe dziri kusimukira zvikuru.
“Kuparaurwa kwechirongwa cheCIC kunondifadza zvikuru sezvo mizinda yakadai ichiita kuti pashaye anosaririra kumashure nekuti pasi rose rave nyika imwe. Mizinda yakadai inoita kuti nharaunda dzekumaruwa dzifanane nedzemumadhorobha panyaya yekuwana ruzivo,” vanodaro Dr Machengete.
Gurukota reHurumende rinomirira Masvingo, Cde Ezra Chadzamira, vanorumbidzwa basa riri kuitwa nePOTRAZ.
Mabhindauko ari kuitwa nePOTRAZ kuMasvingo anosanganisira rekuChikato, kuona kuti zvikoro zvawana masai-sai nenhare, kudzidzisa vanhu makombiyuta nekupa makombiyuta muzvikoro zviri mudunhu iri.
“Sevanhu vanoziva zvavanoita, tichaona kuti zvose zvamatipa hazvishandiswe zvisirizvo kana kuparadzwa,” vanodaro Cde Chadzamira.
Covid-19 yaondonga mabasa ekurima27 Oct, 2020
Vanhu 5 vakafa neCovid pazuva27 Oct, 2020
Mwana wekutsakatika awanikwa27 Oct, 2020